Ahịa Int-Interactive Multi-Channel nke Ahịa | Martech Zone
Interactive Multi-Channel Marketing si Podium
Otu n'ime ihe ndị ọzọ na-akpali demos ẹkenịmde ke ExactTarget Njikọ, ụnyaahụ, bụ ezigbo ngosi mmekọrịta mmekọrịta nke Scott Dorsey, CEO, mere n'oge mmeghe okwu.
Scott gwara onye ọ bụla ka ederede okwu ahụ research na ha adreesị ozi ịntanetị na 38767 inweta Forrester's Ọmụmụ Ihe Mmasị Ọwa 2009 na Ihe omuma ndi ahia bu ike ahia.
Na oge, ezighachiri ozi ederede na-akwado arịrịọ ahụ ma na-arịọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnata ozi olu site n'aka David Daniels, osote onye isi na onye isi nyocha maka Searchrester Research. Email sitere na Scott Dorsey bịakwara jiri ozi ị rịọrọ (n'elu).
Ọ bụrụ na ị zaghachiri DAVID Ozi nzaghachi, ekwentị gị mere ka nkeji ole na ole gachara site na iji ozi olu ndị a:
ExactTarget na-achọ ime ụdị mkpọsa a ka ọ gaa n’ihu n’afọ a site n’ezie ijikọ oku ekwentị n’etiti otu abụọ ka ị wee nwee mkparịta ụka n’ezie.
Nke a bụ ojiji dị mma nke email, olu na ahịa mkpanaka na otu mgbasa ozi ọtụtụ ọwa. Onye na-ede blọọgụ teknụzụ anyị, Adam Small, emeela mkpọsa yiri nke ahụ maka ndị ahịa ya ma bulie ọnụego ha nso.
Tags: Njikọkpachaara anyaakwụkwọ ọgụgụ scottSMSozi ederede
Nwere Twitter na Channel Channel Gị?
Akwụkwọ akụkọ ka na-emebi uru ha bara